သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-04 > Trinity
ဘာသာရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် WKG / GCI နှင့်သက်ဆိုင်သောထူးခြားသည့်လက္ခဏာတစ်ခုမှာ“ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘာသာဝါဒ” ဟုဖော်ပြနိုင်သောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကိုချာ့ချ်သမိုင်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသော်လည်းအချို့ကို၎င်းကို "မေ့လျော့သောအယူဝါဒ" အဖြစ်ရည်ညွှန်းပြီးမကြာခဏသတိမမူမိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါတို့ WKG / GCI အတွက်ကျနော်တို့အဖြစ်မှန်, တနည်းအဖြစ်မှန်နှင့်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Die Bibel lehrt, dass unser Heil von der Dreieinigkeit abhängt. Die Lehre zeigt uns, wie jede Person der Gottheit eine wesentliche Rolle in unserem Leben als Christen spielt. Gott der Vater hat uns adoptiert als seine«innigsten geliebten Kinder» (Epheser 5,1) အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သားတော်ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတော်၌ ငါတို့သည် ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြ၏။ (ဧဖက် 1,3-7), haben Zuversicht in unserem Heil, weil Gott der Heilige Geist in uns wohnt, als Siegel unseres Erbes (Eph1,13-14). Jede Person der Dreieinigkeit spielt eine einzigartige Rolle, uns in Gottes Familie willkommen zu heissen. Obwohl wir Gott in drei göttlichen Personen anbeten, kann sich die Lehre der Dreieinigkeit manchmal so anfühlen,als ob sie sehr schwierig sei, praktisch auszuleben. Doch wenn unser Verständnis und Praxis über die zentralen Lehren übereinstimmen, hat dies ein grosses Potenzial, unser tägliches Leben zu verwandeln. Ich sehe es so: Die Lehre der Dreieinigkeit erinnert uns daran, dass wir nichts tun können, um unseren Platz am Tisch des Herrn zu verdienen – Gott hat uns schon eingeladen und die notwendige Arbeit vollendet, damit wir am Tisch Platz finden. Dank der Errettung durch Jesus und dem Innewohnen des Heiligen Geistes, können wir vor den Vater kommen, eingebunden in der Liebe des Dreieinigen Gottes. Diese Liebe ist für alle, die glauben, kostenlos zugänglich, wegen der ewigen, unveränderlichen Beziehung der Dreieinigkeit.
သို့သော်၊ ဒီဆက်နွယ်မှုမှာကျွန်ုပ်တို့မှာပါ ၀ င်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ ခရစ်တော်၌ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာဘုရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများကိုဂရုစိုက်စေသည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို၎င်းတွင်ပါ ၀ င်စေသည်။ နှင့်ငါတို့မှတဆင့်အခြားသူများကိုရောက်ရှိ။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏အလုပ်ကိုပြီးမြောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမလိုပါ၊ သို့သော်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏မိသားစုအဖြစ်ကိုယ်တော်နှင့်ပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အတွင်း၌တည်သောကြောင့်၊ သူ၏ဝိညာဉ်သည်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ရှိသည်ကိုသတိပြုမိသောအခါကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်စိတ်သက်သာရာရသွားသည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုရှိသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူနှင့်အခြားလူများနှင့်တန်ဖိုးရှိသော၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်ဆံရေးရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေလိုသည်။
ငါ့ဘဝမှာမင်းဥပမာတစ်ခုပေးပါ။ တရားဟောဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်အတွက် "လုပ်သမျှ" တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ငါမကြာသေးမီကလူအုပ်စုတစုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင်၏အစီအစဉ်ကိုအာရုံစူးစိုက်သောကြောင့်ငါနှင့်အတူအခန်းထဲမှာမည်သူရှိနေသည်ကိုသတိမပြုမိခဲ့။ ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုများကိုသဘောပေါက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရယ်မောပြီးဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်သည်။ ဘုရားသခင်ထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောအခါအမှားပြုမိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါ။ ကိုယ်တော့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်စွာဝတ်ပြုနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်မပြင်ဆင်နိုင်သောအရာမရှိကြောင်းသတိရသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဟုတ်ဘဲအံ့ဖွယ်ဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နေထိုင်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏အမှုတော်၌စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
ဖျားနာနေသောမိတ်ဆွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားသောအစာမှမိသားစုဝင်တစ် ဦး မှအောင်မြင်မှုရရှိသည့်အတွက်ဘုရားကျောင်းအား ဆက်၍ အလုပ်လုပ်ရန်လှူဒါန်းခြင်းအထိ၊ ဤအရာအားလုံးသည် us ၀ ံဂေလိတရားကိုဟောရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာ၌။
ဒေါက်တာ Joseph Tkach